Wir helfen Landwirtlnnen und Bedürftigen ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလှုဒါန်းခြင်း – We Help and Care
16. August 2021 28. December 2021 / By admin
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ တောင်သူဦးကြီးများ စိုက်ပျိုးထားသည့် အသီးအနှံများအားဝယ်ယူပြီး စားဝတ်နေရေးခက်ခဲသော အိမ်ထောင်စုများသို့ လှူဒါန်းခြင်းအစီအစဥ်တွင် ပထမအသုတ်အနေဖြင့် အိမ်ထောင်စု ၁၀၀၀စာကို လှိုင်သာယာနှင့် မှော်ဘီရှိ အကူအညီလိုအပ်နေသော အိမ်ထောင်စုများ၊ လှုိင်သာယာရှိမသန်စွမ်းသူများအသင်းများ၊ သီလရှင်ကျောင်း နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများအားပေးပို့ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ရည်မှန်းထားသည့် အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် ၁၀၀၀ ထက်ကျော်လွန်ပြီး အိမ်ထောင်စု ၂၀၀၀ စာကို ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ အလှူရှင်များ၏ သဒ္ဓါတရား ထက်သန်မှုကြောင့် ၂ရက်အတွင်း အလှူငွေပြည့်မှီသွားပြီးဖြစ်ပါသည်။ သဒ္ဓါတရား နည်း၊များမဆို ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့သော အလှူရှင်များအားလုံးသို့ We Help and Care အဖွဲ့မှ တောင်သူဦးကြီးများနှင့် အကူအညီလိုအပ်နေသူများကိုယ်စား အထူးပင် လှိုက်လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားအပ်ပါသည်။
Onaplan of buying vegetables from the farmers of Shan State and deliver it to households having difficulties for foodstuffs, we have delivered asafirst batch to 1000 households as shown in photos. Due to the generous local and foreign donors, the funding exceeded the aim of 1000 households and has reached to 2000 households within2days and thus is an amazing result.
We Help and Care Organisation would like to express our sincere thanks to all the donors on behalf of the farmers and those in need.
Unser Plan, bei LandwirtInnen im Shan-State zu kaufen und an 1000 Haushalte zu verteilen, welche sich kaum mehr Essen leisten können, ist wirklich toll in die Tat um gesetzt worden, Die Fotos sprechen für sich selbst.
Aufgrund der hohen Spendenbereitschaft der Leute aus Myanmar und in allen anderen Ländern, konnten wir unser erklärtes Ziel bei Weitem übertreffen und sogar für weitere 1000 Haushalte Gemüse kaufen. Wir haben es also geschafft innerhalb von2Tagen für in Summe 2000 Familien eine Grundversorgung bereitzustellen.
We Help and care bedankt sich herzlich bei allen großzügigen SpenderInnen, auch im Namen der Farmer und der Familien denen geholfen werden konnte.